Hambalyo bulshada reer Dhahareed | allsanaag
Hambalyo bulshada reer Dhahareed
Degmada Dhahar ee xarunta gobolka Hayland, Puntland , ayaa tartan Cilmiyeedka ay qabtaan Bahda SNTV, oo ku caan baxday qabyaalad , oo aan looga baran dhex dhexaadnimo iyo Soomaalinimo waxay ka galeen kaalinta labaad degmooyinka Soomaaliya.
Degnada Dhahar, ayaa waxa ka guulaysatay degmada Wardheegleey ee gobolka Banadir, oo hoy u ah Villa Soomaaliya iyo radiyo Muqdisho. Degmada Wardhiigleey ayaa dugsiyada ku yaala, sanadkii waxa lagu maal geliyaa Malaayiin doolarka Maraykanka ah oo ah lacagtii Turkiga, reer Yurub, Maraykan iyo Carabuhu ugu deeqeen Soomaaliya guud ahaan .
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa Muqdisho Thabit Cabdi Maxame, oo caawa goob joog ka ahaa Koobkii la gudoonsiinayey degmada Wardheegleey oo ku guulaystay tartan cilmiyeedka sanadkan , ayaa iyaguna waxay ka soo jeedaan Degmada Wardhiigleey ee gobolka Banaadir oo beesha Abgaal gaar ahaan u sheegtaan.
Halka degmada Dhahar, ee gobolka Hayland ayna hal doolar iyagu ka helin dalalka Turkiga, Maraykanka, Carabaha iyo Reer Yurub, hase ahaatee bulshada degaanku isku tashi iyo dulqaaad ay sameeyeen iyagu halkaa ku soo gaareen, maantana ay Soomaali oo dhamina ay wada aqoonsadeen kartidooda iyo dedaalka ay ugu jiraan barbaarinta Ubadka soo koraya , Ka dib markii ay kaalin fiican ka soo wada A galeen tartan cilmiyeedkii dhowaan lagu qabtay magaalooyinka Garowe, Boosaaso iyo Muqdisho oo ay dhamaantood kaalin fiican ka soo wada galeen.
Ugu danbayntii waxa arin lagu farxo ah, in Tartan Cilmiyeed uu qabtay Idaacad ama Talafishan ku caan baxay qabyaalad, oo aan looga baran dhexdhexaadnimo iyo Soomaalinmo, in degmada Dhahar ay degmooyinkii Soomaaliya oo dhan oo ka kooban 78 degmo inay kalinta labaad ka soo galaan . Waxaa kaloo xusid mudan in degmada Dhahar ay ka guulaysatay degmada Wardhiigleey ee gobolka Banaadir, oo ay ka soo jeedeen labadii madaxweyne ee ugu danbeeyey dawladda Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Culusoow , oo deeqahii caalamku bixin jireen si qabyaaladaysan oo fool xun ugu leexin jiray degaano gaar ah oo ay ka mid tahay degmada Wardhuugleey oo beesha Abgaal gaar ahaan u sheegato, degmooyinkii kale ee Soomaaliyeed oo Dhahari ku jirtona ku qadin jiray ama ku cunaqabatayn jiray beelaha dega .
Kaalinta labaad ee degmada Dhahari ka gashay tartan cilimiyeedkii loo qabtay degmooyinka Soomaaliya , maaha mucjiso iska timid ee waa dedaal iyo isku tashi ay sameeyeen bulshada reer Dhahareed, oo Soomaali inteeda kale u muujiyey inay ka maarmi karaan gacmo hooriska shisheeyaha. Caruurta oo wax la baraana ay tahay mustaqbalka Soomaaliya iyo Somaali caalamka intiisa kale wax la qaybsata.
Degmada Dhahar, Waa degmada qura ee madaxweyne Soomaaliyeed, wasiir federaal ah, iyo madaxweynayaal maamul goboleedyo ayna intii burburkii Soomaaliyaka ka danbaysay soo booqan. Halka madaxda Soomaaliyeed oo dhami ay maanta hoy u tahay xaafadda Wardhiigleey ee Gobolka Banaadir ee ka guulaystay degmada Dhahar.
← Hadaad Itoobiyaan iyo Mooryaanimo jeceshahay anagu Soomaalinimo ayaanu jecelnahay Next Post →